Wasiirka amniga Puntland oo sheegay inay qabanayaa cidii ka hortimaada nidaamka Xisbiyadda badan. – Radio Daljir
Wasiirka amniga Puntland oo sheegay inay qabanayaa cidii ka hortimaada nidaamka Xisbiyadda badan.
Nofeembar 15, 2012 6:55 b 0
Qardho Nov 15-2012, Wasiirka Wasaaradda amniga iyo DDR ee Dawlada Puntland duuliye sare ?Khaliif Ciise Mudan oo waraysi siiyey Radio Daljir ayaaa sheegay in Wasaarada amniga Puntland aysan u dulqaadan doonin cid kasta oo isku dayda carqalataynta nidaamka Asxaabta badan ee Puntland wado.
“Ninkii kasoo horjeedda ?nidaamka Dawlada iyo Dimuqraadiyada waan ka qabanaynaa umadda” ayuu yiri Khaliif Ciise Mudan.
Wasiirku wuxuu sheegay in la qancinayo cidii dood ka qabta arimaha Asxaabta baddan ee la wado hase ahaatee wuxuu sheegay inay jiraan dad iyagu wata dano gaar ahaaneed kuwaasoo uusan magacooda sheegin balse uu tilmaamay inay qaban doonaan sida uu hadalka u dhigay.
Khaliif Ciise Mudan ayaa sidoo kale ka hadlay ururka Al-shabaab uu mudooyinkii danbe isku aruursanayey buuraleyda Galgala ee gobolka Bari kuwaasoo uu sheegay inay si deg deg ah u tir tiri doonaan.
Hadalka Wasiirka ayaa kusoo beegmay iyadoo shalay M/weyne Faroole ku dhawaaqay urur siyaasadeed la magac baxay Horseed uu sheegay inuu yahay xisbiga talada haya.
Guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Maxamed Dheere oo galabta lagu aasay Muqdisho.
Baro Dastuurkaaga, Nov 14-2012,Maxamed Cabdilaahi Cali (Kooshin)_Daljir Garoowe (Dhegayso)